သက်ဝေ: အမှောင်ဘက်ခြမ်း မှ ကွယ်ရာ (သို့မဟုတ်) တွယ်ရာ
sonata-cantata August 21, 2011 at 9:05 PM
သူခိုးကိုလည်း ချစ်အောင် သူရေးတတ်တယ်...း)
ချစ်ကြည်အေး August 21, 2011 at 9:36 PM
ဖတ်ကောင်းတယ်။ ဆေးလိပ်ခိုးသောက်တာ သားက မိသွားတဲ့အခိုက် ပျက်နေမဲ့ အဖေ့ရဲ့ မျက်နှာ.....၊ မြင်ယောင်မိပါရဲ့....
rose August 21, 2011 at 10:16 PM
ဆေးလိပ် ခိုးသောက်နေတဲ့ အဖေနဲ့ မိသွားတဲ့ သားတို့ရဲ့ ပုံရိပ်လေးကို မြင်သာထင်သာအောင် ရေးဖွဲ့တတ်လိုက်တာ။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ရေးဖွဲ့ထားတာလည်း အသက်ဝင်တယ်။ ပွဲဈေးတန်း၊ မိုးရွာချိန်။ ကိုယ့်ကျန်းမာရေးကို အထိခိုက်ခံပြီး ဘာလို့ လူတွေ အရက်၊ ဆေးလိပ်တွေ သောက်ကြတာလဲ မသိဘူးနော်။
Nge Naing August 21, 2011 at 10:30 PM
Congratulations မသက်ဝေ!!! ကျန်တာတွေကိုတော့ မနက်ဖြန်ကျမှ စာအုပ် Download လုပ်ပြီးသွားဖတ်တော့မယ်။ ဆက်လက်အောင်မြင်ပါစေ။
ဒီမိုးဆူး August 21, 2011 at 10:41 PM
ရင်ဘတ်ထဲမှာ ဘာလုပ်ပေးရမှန်းမသိတဲ့ အမျိုးအမည်မသိ ခံစားချက်တစ်ချို့့ကျန်ခဲ့တယ် ... ရေးတတ်လိုက်တာ ...အားကျတယ် ..
ညိမ်းနိုင် August 22, 2011 at 12:02 AM
တို့ဘာနဲ့များ နှစ်သိမ့်ပေးနိုင်ပါ ပါလိမ့်.....:(
ဖြစ်ဖူးတယ်။အမေက ချဲထိုးတတ်တယ်။ ဒါမယ့် တစ်မိသားစုလုံးကလဲ မကြိုက်တော့ ခိုးပီး ထိုးတယ်။ အဲ့မှာ မနက်စောစော ဘောက်ချာလေးတွေ ကြည့်နေတုန်း နောင့် နဲ့ တိုးတော့ ကမန်းကတမ်း ဖွက်ပီး မျက်နှာလေး ပျက်နေတာ အရမ်းသနားတာပဲ။ အဲ့ဒါနဲ့ ကျန်တဲ့သူတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီး တစ်လကို ဘယ်လောက်ဖိုးတော့လုပ်ပါလို့ လစ်မစ်ပေးလိုက်တယ်။ သူလဲ စီးပွားဖြစ် လုပ်တာ မဟုတ်တော့ အဆင်ပြေ နောင့် လဲ စိတ်ပေါ့ပါးသွားဖူးတယ်။
မိုးငွေ့...... August 22, 2011 at 11:50 AM
Hmoo August 22, 2011 at 12:39 PM
မအိမ်သူ August 22, 2011 at 1:58 PM
မမြင်ကွယ်ရာမှာ မတွယ်တာသင့်တဲ့အရာကို တွယ်တာတပ်မက်ပြီး ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ပြုတတ်ကြတာ လူ့သဘာဝလားမသိပါဘူး မသက်ဝေရေ.. အက်ဆေးလေးက ပီပြင်တယ်။ စာအုပ်လဲ ဒေါင်းပြီးဖတ်အုံးမယ်။
J-Nyanlinn August 22, 2011 at 4:17 PM
ရိုး ရိုး အ ဖြစ် အ ပျက် လေး ကို Heart ဟတ် ထိ အောင် ရေး လဲ ရေး တတ် တယ်.. သက် ဝေ တစ် ယောက် ဝိုင် ချို ချို ခါး ခါး လေး.... ခ လေး တွေ မ သိ အောင် သောက် ရင်း သောက် ရင်း စွဲ လမ်း နေ ပြီ လား !! ( jus kidding )
Kay August 22, 2011 at 4:57 PM
လမ်းလျှောက်လာရင်း..မှန်တံခါး နဲ့..၀ုန်းကနဲ တိုက်မိသလို မျိုး
ဖတ်နေရင်း.. the end နဲ့..ဒုန်းကနဲ..
Nyi Linn Thit August 22, 2011 at 6:44 PM
ကောင်းတယ် မသက်ဝေ..၊ ခေါင်းစဉ်လေးကအစ ကျစ်လစ်ပြီး အတော်လေး တာသွားတယ်၊ မသက်ဝေရဲ့ အက်ဆေးတွေ ဖတ်ရတာ ဘုရားပွဲဈေးက အော်ပရာ ကနေတဲ့ ဇတ်ရုံ အပြင်ဖက်မှာ လမ်းဘေးမုန့်ဟင်းခါးကို ငရုတ်သီး အများကြီးနဲ့ စားရသလိုပဲ...၊ တပြိုင်နက် တည်းမှာ အရောင်၊ အနံ့၊ အရသာ၊ အကြား အာရုံတွေ အများကြီး ရလေ့ရှိ ပါတယ်....။း)
T T Sweet August 22, 2011 at 8:26 PM
စာအုပ်လေး ဒေါင်းလုပ်ချပြီ ဖတ်ပြီးသွားပြီ။ သူငယ်ချင်း ၂ယောက်ဟာကို အရင်ရှာဖတ်တာပေါ့။ ဘာရမလဲ။
ရေထားတာလေးတွေ၊ တွေးထားတာလေးတွေ အားလုံး ကောင်းပါ၏။
T T Sweet August 22, 2011 at 8:29 PM
အိမ်မှာလဲ ဆေးလိပ်ခိုးသောက်သူတစ်ယောက်ရှိတယ် အန်တီသက်ဝေရေ။ ညညကျ အမှိုက်ပုံးနားမှာ တွေ့တွေ့နေတာ။ သနားတာနဲ့ မသိချင်ယောင်ပဲ ဆောင်နေရတယ်။ အန်တီသက်ဝေလို ရေးတတ်ရင် ၀ထ္ထုဖြစ်မှာ ....
အမိမြေရဲ့မြင်ကွင်းလေးထဲ သဘောတကျမျောပါရင်း မကြာခင်အဆုံးသတ်တော့မှာပဲဆိုပြီးဖတ်လာမိပေမယ့် တကယ်တမ်းအဆုံးသတ်တော့ ပြည့်စုံတယ်လို့ ခံစားရတယ်...
8Yar August 24, 2011 at 8:09 PM
ရင်ထဲမှာမကောင်းဘူးဗျာ။ လေးစားပါတယ် ခင်ဗျာ။
Iora August 26, 2011 at 4:53 PM
ဒက်ဒီ မဆုံးခင်က အဲလိုဘဲ လူလစ်ရင် ဆေးလိပ်ခိုးသောက်တယ်။ ဒက်ဒီဆုံးသွားတော့ သူလုပ်ချင်တာတွေ ကိုမလုပ်ဘို့ တားခဲ့မိတဲ့ ကုိုယ့်ကိုကုိုယ် မုန်းပြီး နောင်တတ၀က်ရခဲ့မိပါတယ်။ မသက်ဝေစာကကိုယ့်ကုိုမျက်ရည်ကျစေပါတယ်။